Abathengisi besayensi baxoxa ngezinzuzo zocwaningo lwegama elingukhiye le-FBA
Isikhathi Iposi: Jul-02-2021
ILas Vegas, ngoJuni 9, 2021 (Global News Agency) -Umthengisi Wezesayensi eLas Vegas, eNevada usanda kudingida amagama angukhiye nezinzuzo zocwaningo lwamagama asemqoka lokugcwaliseka komthengisi we-Amazon. Le nkampani isanda kumemezela ukwethulwa kwethuluzi labo elingukhiye le-Amazon FBA, elenzelwe abantu abathengisa ku-A ...Funda kabanzi »
Ntambama ngoJuni 16, isitimela sokuqala samatshe esisuka echwebeni lezokuthutha lezitimela i-yinchuan saya echongqing sisuka esiteshini sezimpahla yinchuan eseningizimu. Lesi sitimela esikhethekile samatshe sinamakhonteyina angama-60 esewonke, anesisindo samathani ayi-1650, kanti inani lalingama-yuan ayizigidi ezingama-6.73. Ukusebenza kwe ...Funda kabanzi »
Izisulu zokudubula kwabantu zeFedEx zithola uxhaso esikhwameni somphakathi
Isikhathi Iposi: Jun-04-2021
Kudlule amasonto ayisithupha e-Indianapolis-six selokhu indoda yesibhamu ibulale abantu abayisishiyagalombili esikhungweni seFedEx ground e-Indianapolis. Ngaleso sikhathi, umphakathi ubumbene ukuxhasa izisulu, abasindile nemindeni yabo, futhi waqoqa imali engaphezu kwezigidi eziyi- $ 1.5. “Uma izigameko ezinje zenzeka, abantu bazizwa bengenakuzisiza a ...Funda kabanzi »
I-DHL ithola isivumelwano esisha se-Logicor sika-219,22 square foot Hams Hall
U-Logicor, ongumnikazi we-European logistics real estate no opharetha, uqashe indawo yokugcina impahla nokusabalalisa izinyawo ezingama-219,112 eHams Hall Distribution Park eBirmingham, UK kuya eDHL. Umholi womhlaba wonke embonini yezokusebenza usayine isivumelwano esisha sesikhathi eside esakhiweni ukuhlangabezana ...Funda kabanzi »
Umqedazwe omusha womqhele waseNdiya uhlasela imboni yezokuthunyelwa emhlabeni jikelele
Sisebenzisa amakhukhi ngezizathu ezahlukahlukene, njengokugcina ukuthembeka nokuvikeleka kuwebhusayithi ye-FT, ukwenza okuqukethwe kube ngokwakho kanye nokukhangisa, ukuhlinzeka ngemithombo yezokuxhumana, nokuhlaziya ukusetshenziswa kwewebhusayithi yethu. Igagasi lokutheleleka ngeCovid-19 eNdiya lifinyelele ukuthunyelwa kwamanye amazwe ...Funda kabanzi »
I-LNG njengophethiloli iqoqa isivinini, kepha imikhumbi emidala ibhekana nokushayeka emgwaqeni
Amanye ama-18.5% ezakhiwo ezintsha ezitholwe ezinyangeni ezine zokuqala zika-2021 zenzelwe ukusebenza ku-LNG njengophethiloli ngokomphakathi ohlukanisayo we-DNV. UPaul Bartlett | Meyi 13, 2021 Kodwa-ke, imikhumbi eminingi emidala mancane amathuba okuthi ihlangabezane nezidingo ezintsha zokuqina kwe-IMO carbon ezingase zamukelwe eMEPC ...Funda kabanzi »
Ukuphathwa kwamazwe omhlaba kubaluleke kakhulu ezinkampanini zokuhweba zakwamanye amazwe
Isikhathi Iposi: Ephreli-15-2021
Ungayithola kanjani inkampani yezokuhweba ngempahla yangaphandle? 1. Ngokuhwebelana kwethu namanye amazwe, lapho ibhizinisi lezebhizinisi likhudlwana likhula, lizinza kakhudlwana. Okokuqala, kufanele kube khona inkampani yamazwe omhlaba yokuhambisa impahla kanye neyezinhlelo zokusebenza ezinze njengeTaishan. Le nkampani yezimpahla zokuhambisa ayiyona ...Funda kabanzi »
Umkhuba wokuthuthuka kwempahla yamazwe omhlaba
Ngokuthambekela kokuhwebelana kwembulunga yonke nokwanda kwezinsizakalo, umqondo wokuthengwa kwempahla uhluke ngokuphelele kunangaphambili, inqubo iya ngokuya iba yinkimbinkimbi, futhi izidingo zamakhasimende ziya ngokuya ziba lukhuni ngokwengeziwe. Ngakho-ke, eminyakeni yamuva nje, abanye baya ...Funda kabanzi »
Umkhakha wezokuxhumana we-International Express transit big data
Imboni yezokuhwebelana yezokuhwebelana yamazwe omhlaba ihlobene kakhulu nezinye izimboni ezinkulu, njengemboni yezokuxhumana kanye nomkhakha we-e-commerce, ngamathuba amakhulu wokubambisana. Ngokusebenzisa okuqhubekayo nokulungiswa kwesakhiwo senkonzo ngokuhlanganiswa, akukwazi ukuthuthukisa kuphela ...Funda kabanzi »